မြန်မာ့အကကို ကြည့်မဝနိုင်အောင် ကပြလိုက်တဲ့ ဆရာမလေး (ရုပ်သံ) – Daily Feed MM
တိုင်းတစ်ပါး ယဉ်ကျေး မှုတွေ အများဆုံး စိမ့်ဝင် လာတဲ့ နှစ်ဆယ့် တစ်ရာစု ခေတ်ကြီး ထဲမှာ ခေတ်ပေါ်အကတွေကို စိတ်ဝင်တစား သင်ယူနေသူတွေများ လာပေမယ့် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကတွေကို စိတ်ဝင်တစား သင်ယူမယ့်သူတွေကတော့ တဖြည်းဖြည်း
ရှားလာပြီလို့ ဆိုရမှာပါ။ဒါပေမယ့် ခေတ်သစ် ပညာရေးစနစ်အရ အခြေခံပညာ ကျောင်းတွေမှာ အခြေခံ ကဗျာလွတ်အက နဲ့ မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အကတွေကို သင်ကြားဖို့ သတ်မှတ်လိုက် တာကတော့ တကယ်ကို ဝမ်းသာစရာပါ။ မြန်မာအကကို တကယ်တတ်
ကျွမ်းလိမ္မာစွာ ကတတ်သူတွေရှား လာတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာတော့ လတ်တလော လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ မြန်မာအကတွေ နဲ့ နာမည်ကြီး လာသူကတော့ ဆရာမခိုင်မာလွင်ပါ။ဆရာမခိုင်မာ လွင်ကတော့ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်က ဆရာမတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး မြန်
မာရိုးရာအကဗွီဒီယိုလေး ရိုက်ကာ လူမှုကွန်ရက်မှာ မျှဝေလေ့ရှိသူပါ။ မြန်မာအကဆို ပျင်းစရာကြီးလို့ သတ်မှတ် ထားကြသူတွေတောင် ဆရာမရဲ့ အချိုးအစား ကျကျ ကတတ်မှု၊ မျက်နှာအမူအရာလေးတွေကြောင့် ကြည့်ရှုသူတော်တော်များများ သဘောကျကာ ဝန်းရံ
အားပေးမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ…. မြန်မာအကတွေကို တန်ဖိုးထားလေးစားသလို နောက်မျိုးဆက် တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြန်လည်မျှဝေပေးနေတဲ့ ဆရာမခိုင်မာလွင်ရဲ့ ကြည့်ရှုသူ တစ်သန်းနီးပါးအားပေးခဲ့တဲ့ အကဗွီဒီယိုလေးကို ဆယ်လီကမ္ဘာ
ပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
တိုင္းတစ္ပါး ယဥ္ေက်း မႈေတြ အမ်ားဆုံး စိမ့္ဝင္ လာတဲ့ ႏွစ္ဆယ့္ တစ္ရာစု ေခတ္ႀကီး ထဲမွာ ေခတ္ေပၚအကေတြကို စိတ္ဝင္တစား သင္ယူေနသူေတြမ်ား လာေပမယ့္ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအကေတြကို စိတ္ဝင္တစား သင္ယူမယ့္သူေတြကေတာ့ တျဖည္းျဖည္း
ရွားလာၿပီလို႔ ဆိုရမွာပါ။ဒါေပမယ့္ ေခတ္သစ္ ပညာေရးစနစ္အရ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေတြမွာ အေျခခံ ကဗ်ာလြတ္အက နဲ႔ ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အကေတြကို သင္ၾကားဖို႔ သတ္မွတ္လိုက္ တာကေတာ့ တကယ္ကို ဝမ္းသာစရာပါ။ ျမန္မာအကကို တကယ္တတ္
ကြၽမ္းလိမၼာစြာ ကတတ္သူေတြရွား လာတဲ့ ေခတ္ႀကီးထဲမွာေတာ့ လတ္တေလာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ ျမန္မာအကေတြ နဲ႔ နာမည္ႀကီး လာသူကေတာ့ ဆရာမခိုင္မာလြင္ပါ။ဆရာမခိုင္မာ လြင္ကေတာ့ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္က ဆရာမတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ျမန္
မာ႐ိုးရာအကဗြီဒီယိုေလး ႐ိုက္ကာ လူမႈကြန္ရက္မွာ မွ်ေဝေလ့ရွိသူပါ။ ျမန္မာအကဆို ပ်င္းစရာႀကီးလို႔ သတ္မွတ္ ထားၾကသူေတြေတာင္ ဆရာမရဲ႕ အခ်ိဳးအစား က်က် ကတတ္မႈ၊ မ်က္ႏွာအမူအရာေလးေတြေၾကာင့္ ၾကည့္ရႈသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား သေဘာက်ကာ ဝန္းရံ
အားေပးမႈရရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ ပရိသတ္ႀကီးေရ…. ျမန္မာအကေတြကို တန္ဖိုးထားေလးစားသလို ေနာက္မ်ိဳးဆက္ ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းျပန္လည္မွ်ေဝေပးေနတဲ့ ဆရာမခိုင္မာလြင္ရဲ႕ ၾကည့္ရႈသူ တစ္သန္းနီးပါးအားေပးခဲ့တဲ့ အကဗြီဒီယိုေလးကို ဆယ္လီကမာၻ
ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္မွ်ေဝေပး လိုက္ပါတယ္။
အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကထွက်ပြီး ယင်ကောင်မွေးမြူရင်း ချမ်းသာလာသူ